Filipina Duterte: ireo mpandika lalàna amin'ny quarantine COVID-19? Tifiro maty izy ireo!
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Filipina Duterte: ireo mpandika lalàna amin'ny quarantine COVID-19? Tifiro maty izy ireo!
Nandritra ny lahateny iray tamin'ny fahitalavitra tsy voalamina tamin'ny alarobia alina, ny filoha Filipina Rodrigo Duterte dia namoaka fampitandremana lehibe ho an'ireo olom-pirenena, izay manitsakitsaka ny fikatonan'ny fanidiana eo afovoan'ny Coronavirus krizy - manitsakitsaka ny quarantine ary mety hitifitra avy hatrany ianao, satria ny mpitandro ny filaminana Filipiana dia manana baiko handroaka ireo 'mpanakorontana' mahery setra rehefa miady amin'ny fipoahan'ny firenena.
Tamin'ny fampitandremana mafy dia mafy, nilaza tamin'ny polisy sy ny miaramila i Duterte mba hampiasa ny fonon-tànana ho an'ireo izay manitsakitsaka ny fepetra fanidiana any Luzon - ilay nosy lehibe indrindra sy be mponina indrindra - nampiharina tamin'ny volana lasa mba hanakanana ny fihanaky ny virus coronavirus.
“Tsy hisalasala aho. Ny didiko dia any amin'ny polisy sy ny tafika ary koa ny [distrika], fa raha misy ny korontana na ny tarehin-javatra miady ny olona ary eo an-dàlana ny ainao dia tifiro ho faty izy ireo, ”hoy ny filoha.
Nanome ny adiresiny i Duterte ora vitsy monja taorian'ny mponina 21 tao an-tanànan'ny Quezon - ny ankamaroan'izy ireo dia mpiasa tsy dia manana asa ambany ary tsy afaka miasa mandritra ny fanidiana - dia nosamborina noho ny fihetsiketsehana tsy nisy fahazoan-dàlana. Nomelohin'ny vondrona mpiasa Solidarity of Filipino Workers (BMP) ny fisamborana, izay nanameloka ny governemanta noho ny fikendreny ireo olona sahirana mangataka fanampiana mandritra ny krizy.
Nangataka tamin'ireo izay mila fanampiana ny filoha mba hanam-paharetana, namporisika azy ireo fa “miandry fotsiny ny fandefasana na dia tara aza, dia ho tonga izany ary tsy ho noana ianareo,” fa nampitandrina kosa ny mponina fa “aza atao fampitahorana ny governemanta. Aza manao fanamby amin'ny governemanta. Ho resy tokoa ianao. ”
Ny didim-pitsarana manara-penika dia nametraka ny mponina manontolo an'i Luzon 57 tapitrisa ho “karokarenan'ny vondrom-piarahamonina nohatsaraina,” mametra ny fivezivezena manerana ny nosy hividy sakafo, fanafody ary kojakoja ilaina amin'ny fiainana hafa ary manidy ny indostria ilaina rehetra.
The Filipina dia nanamafy tranga maherin'ny 2,300 an'ny Covid-19 ary 96 no maty. Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana kosa dia nahatsikaritra fa noho ny isan'ny fitsapana natao tao dia azo inoana fa betsaka kokoa ny areti-mifindra, saingy nilaza izy ireo fa tokony "hitombo be amin'ny andro ho avy."
Ny COVID-19 dia niteraka fianjerana 77% tamin'ny fiaramanidina manerantany